धमला दम्पतीले जन्म दिनमा गरे गरिब जनताको लागि हस्पिटल बनाउने घोषणा ! – List Khabar
Home / समाचार / धमला दम्पतीले जन्म दिनमा गरे गरिब जनताको लागि हस्पिटल बनाउने घोषणा !
धमला दम्पतीले जन्म दिनमा गरे गरिब जनताको लागि हस्पिटल बनाउने घोषणा !
admin October 25, 2021 समाचार Leaveacomment 63 Views
रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवम् प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले आगामी दुई/तीन वर्षभित्र धादिङको राजमार्ग आसपासमा आफ्नो आमा–बुवाको नाममा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो ४६औं जन्मदिन मनाउने क्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आईतबार आयोजित कार्यक्रमलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै धमलाले यस्तो बताएका हुन्।
आफू्नो गृहिजल्लामा दुई÷तीन वर्षभित्रै सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाईसक्ने धमलाको घोषणा छ । उनले अस्पताल बनाउनुको कारण भने राजमार्गमा सयौंको संख्यामा विरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सहरु जाममा परेको देखेर धादिङमा अस्पताल बनाउने सोच बनाएको पनि स्पष्ट पारे । उक्त अस्पतालमा भने गरिब, असहाय, दिनदुःखीहरुको भने निःशुल्क उपचार गर्ने पनि धमलाले घोषणा गरे।
स्तै, उनले क्लबको वार्षिकोत्सवमा दिईँदै आएको पत्रकारिता पुरस्कारमा आगामी वर्षबाट तेजेन्द्र–सुन्तली खड्का स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिईने पनि आजै घोषणा गरेका छन् । तेजेन्द्र खड्काका दम्पत्तिको कोरोना संक्रमणको कारण निधन भएको थियो । आज जन्मदिन मनाउँदै गर्दा धमला अतित सम्झिएर भावुक बनेका थिए।
रिपोर्टर्स कलबको स्थापना कालदेखि नै सक्रिय अग्रज पत्रकारहरुको उपस्थितिमा मनाईएको जन्मदिनमा उनले सबैलाई सम्झिएका थिए। सम्बोधनको क्रममा धमलाले आफ्नो सिमन भनेको देश र जनताको लागि पत्रकारिता गर्नु रहेको पनि सुनाए।
उनले भने,‘क्लबको सफलतामा धेरैको योगदान छ । देश र जनताप्रति समर्पित हुँदै आएको क्लब आगामी दिनमा पनि यही उद्देश्यमा खरो उत्रिनेछ । ऋषि धमलाको पत्रकारिता पनि देश र जनताप्रति नै रहँदै आएको छ । गरिब, असाहय, दिनदुःखीको पक्षमा म निरन्तर खटिनेछु। देशको महारोग भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार अन्त्यकोलागि अभियान चलाउँछु । मैले नेतृत्वका गरेका सबै मिडियाको स्लोगन भनेको भ्रष्टाचारीलाई नग्याउँने हो । देशलाई सम्पन्न बनाउने नै हो । जनतालाई खुशी तुल्याउनुपर्छ।’
उनले आज लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनको लागि पनि आफूले पहल गर्ने बताए । उनले भने,‘खाडीमा बसेकाहरुलाई देशमै फर्काउनुपर्छ । उनीहरुलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । युवा पुस्तालाई देशको विकासमा समर्पित गराउनुपर्छ । विदेशमा हुँदा हाम्रा नेपाली युवाहरुले सिकेका सिप र ज्ञानलाई यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ रोजगारीको लागि विदेशिएका कतिपय युवाहरुको बाकसमा शब आउने गरेको भन्दै विमानस्थलको दृश्य कारुणिक रहेको पनि उनले स्मरण गराए । यसो भन्दै गर्दा धमला भावविह्वल भएका थिए।
धमलाले आफ्नो एकमात्रै एजेण्डा भनेको ‘देश, देश, देश र जनता, जनता र जनता’ मात्रै भएको सुनाए । उनले भने,‘मैले पत्रकारितामा लागेको दिनदेखि नै आफूलाई जनताको लागि पत्रकारिता गरिरहेको छु, म आजपनि उद्घोष गर्छु–म यसमा अझै खरो उत्रिन्छु।’
धमलाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमै आफूले जन्मदिन मनाउनुको पनि खास कारण रहेको सुनाए । उनले आज आफू जहाँ र जुन स्थानमा भएपछि क्लबको कारण नै यो सम्भव भएको सुनाए । उनले क्लब साझा मञ्च रहेको पनि सुनाए।
उनले भने,‘रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । किसुनजीको सबैभन्दा बढि अन्तर्वाार्ता लिने पत्रकार म हुँ । विमर्शमा म हप्ता बिराएर अन्तर्वार्ता लिन्थें । मेरो पत्रकारिता भनेको नै देश र जनता हो । २०४६ को जनआन्दोलनसँगै मेरो पत्रकारिता सुरु भएको हो । जीवेन्द्र सिम्खडाले पत्रकारितामा ल्याउनुभयो । समालोचना दैनिकमा १४ वर्षको उमेरमा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ । ०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा म ७ दिन जेल पनि परें । महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखिएको थियो । त्यही दिनदेखि मैले प्रण गरें अब मैले पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’
धमलाले आज कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीलाई पनि सम्झिएका छन् । उनले नयाँ दिल्लीमा उपचार गराईरहेका गिरीको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरे । उनले भने,‘प्रदिप गिरीले नै मलाई किसुनजीको अन्तर्वार्ता लिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लिएर जानुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिएको हुँ । आजसम्म अविरल रुपमा क्लब अघि बढिरहेको छ। हामी कानूनी राज्यको पक्षमा छौं । हाम्रो चाहना भनेको भ्रष्टाचाररहित समाज होस ।’ धमलाले २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि आफू धेरैपटक जेल परेको सुनाए।
उनले भने,‘राजाले माघ १९ गते कू गरे, मैले माघ २१ गते सडकमा बहस गरें । त्यतिवेला भीम रावल, नारायण खड्का र सीपी मैनालीलाई बोलाएको थिएँ, उहाँहरु आउन डराउनुभएको थियो, तर मैले उहाँहरुलाई लिएर आएँ । तीनै जनाले बोलेर जानुभयो ।’ धमलाले आफ्नो लागि लोकतन्त्र प्राणभन्दा प्यारो रहेको सुनाए र सिस्टमको पक्षमा जहिल्यै दृढ भएर उभिने पनि बताए।
Previous विवाहको जोस न सकिदै,श्रीमानले केटी लिएर फ रार भए,विवाहको २ महिना नबित्दै छो ड्नुको कारण यस्तो छ (भिडियो हेर्नुस्)
Next भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय